यहोवालाई माया गर्ने केटी | छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्
हामीले थाह पाउनुपर्ने पवित्र रहस्य
यहोवालाई माया गर्ने केटी
आफ्नो बुबा र यहोवालाई खुसी बनाउने केटी
असल काम गर्ने केटो
योशियाहका असल साथीहरू
यहोवाबारे बोल्न नडराउने मान्छे
येशूको कुरा लेख्ने मान्छेहरू
अरूलाई मदत गर्ने केटो
पृथ्वीभरि परमेश्वरको राज्य
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अज्ये अफ्रिकान्स अबुइ अब्खाज अरबी अलुर अल्टाइ अल्बेनियन अहन्टा आइरिस आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आसामी इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इबानाग इबिन्डा इलोको इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू उर्होबो एडो एफिक एम्बेरा (साटिओ) एसान एस्टोनियन ओटेटेला ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काचिन काजाक काबाइली किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किनान्डे किन्यारवान्डा किपेन्डे किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (पास्टाजा) कुइचुआ (सान्टिआगो डेल एस्टेरो) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा खाना गा गाउरानी गाउरानी (बोलिभिया) गारीफुना गालिसियन गिटोंगा गुजराती गुना गुर्जे गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चुवाबो चेक चोल चोवे जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जाराकू जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टान्ड्रयो टिभ टुभालुअन टुभिनियन टेटन डिली टोंगन टोराजा डच डाँग्मे डायाक ङाजु डिगोर डुआला डुसुन डेनिश ड्रेहु तरहुमरा (मध्य) ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक तोबा त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाइजेरियन पिजिन नाभाहो नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ निकोबारेज नेङ्गोने नेपाली नोंगा न्दौ न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पिजिन (क्यामरून) पियारोआ पुलर पेज पेन्सिल्भेनिया जर्मन पेमोन पेल्ले पोर्चुगिज पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली फ्राफ्रा बंगाली बम्बारा बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाटाक (सिमालुङ्गुन) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बासा (लाइबेरिया) बास्क बिकोल बियाक बिसाउ गिनियन क्रिओल बिस्लामा बुल्गेरियन बेते बोउलो भलेन्सियन भियतनामिज भेजो भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मझाहुआ मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मानिन्काकन (पूर्वेली) मान्ड्जाक मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिक्सटेक (ह्वाजुआपान) मिजो मिहे मूर मेन्डे मोटु म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रापा नुई रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रोमानियन रोमानी (उत्तरी ग्रिस) रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) रोमानी (पूर्वी स्लोभाकिया) रोमानी (बुल्गेरिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुग्बारा लुन्डा लुभेल लेन्जे लो जर्मन लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वास्टेक (सान लुइस पोटोसी) विची वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सङ्गीर सरमक्कन सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सार्नामी सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिनाम्वांगा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सुसु सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोमाली सोली सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
धेरै वर्षअघिको कुरा हो। यहोवालाई माया गर्ने एउटी केटी थिई। उसको नाम रिबेका थियो। उसले पछि इसहाकसँग बिहे गरी। इसहाक पनि यहोवालाई माया गर्थ्यो। रिबेका र इसहाकको भेट कसरी भयो? रिबेकाले कसरी यहोवालाई माया गरी? अब उसको कथा सुन है!
इसहाकको बुबाको नाम अब्राहाम र आमाको नाम सारा थियो। तिनीहरू कनान भन्ने ठाउँमा बस्थे। त्यहाँका मान्छेहरू यहोवालाई माया गर्दैनथे। तर आफ्नो छोरा इसहाकले यहोवालाई माया गर्ने केटीसँग विवाह गरोस् भन्ने अब्राहाम चाहन्थ्यो। त्यसैले उसले आफ्नो एउटा नोकरलाई हारान भन्ने ठाउँमा पठाउने विचार गऱ्यो। उसले एलिएजर नाम गरेको नोकरलाई हारान पठाएको हुनुपर्छ। हारानमा अब्राहामका नातेदारहरू बस्थे। अनि अब्राहामको नोकर एलिएजरले त्यहींबाट इसहाकको लागि दुलही खोज्नुपर्थ्यो।
सबै उँटलाई पानी खुवाउनु गाह्रो थियो तैपनि रिबेकाले सबैलाई पानी खुवाई
अब्राहामका अरू नोकरहरू लिएर एलिएजर हारान भन्ने ठाउँमा जान्छ। हारान निकै टाढा थियो। त्यसैले तिनीहरूले दसवटा उँटमा खानेकुरा र उपहार बोक्छन्‌। हारान पुगेपछि तिनीहरू एउटा इनारनजिकै थकाइ मार्न बस्छन्‌। अब एलिएजरले इसहाकलाई सुहाउने दुलही कसरी भेट्टाउँछ? त्यस इनारमा केटीहरू पानी लिन आउँछन्‌ भनेर एलिएजरलाई थाह थियो। त्यसैले उसले यहोवालाई यसरी प्रार्थना गऱ्यो: ‘यहोवा, यहाँ पानी लिन आउने केटीलाई म पानी देऊ भन्छु, अनि जुन केटीले मलाई र मेरा उँटहरूलाई पानी दिन्छे, ऊ नै इसहाकको लागि तपाईंले छान्नुभएको दुलही हो भनेर मैले थाह पाउनेछु।’
नभन्दै रिबेका नाम गरेकी एउटी केटी इनारमा पानी लिन आउँछे। ऊ असाध्यै राम्री थिई। एलिएजरले उसलाई भन्छ, ‘ए नानी, मलाई पानी देऊ न!’ रिबेका भन्छे, ‘हुन्छ नि, म तपाईंलाई र तपाईंका उँटहरूलाई पनि पानी दिन्छु।’ तिमीलाई थाह छ, तिर्खाएको उँटले धेरै पानी खान्छ। त्यसैले ती उँटहरूले पनि टन्नै पानी खान्छन्‌! चित्रमा हेर त, रिबेका के गर्दै छे?— त्यति धेरै उँटहरूलाई पानी खुवाउन रिबेकाले कति पटक ओहोरदोहोर गरिहोली! एलिएजरचाहिं यहोवाले प्रार्थनाको जवाफ दिनुभएकोले दङ्ग पर्छ।
एलिएजरले रिबेकालाई थुप्रै उपहार दिन्छ। रिबेकाले एलिएजर र अरू नोकरहरूलाई घरमा बोलाउँछे। घर पुगेपछि एलिएजरले रिबेकाको बुबा, आमा, दाइ सबैलाई भेट्छ। त्यसपछि आफू किन हारान आएको र यहोवाले कसरी प्रार्थनाको जवाफ दिनुभयो भनेर बताउन थाल्छ। एलिएजरको कुरा सुनेपछि रिबेका र इसहाकको बिहे गरिदिन रिबेकाको बुबा, आमा, दाइ तयार हुन्छन्‌।
रिबेका एलिएजरसँगै कनान गई र इसहाकसँग बिहे गरी
तर रिबेका नि? इसहाकसँग बिहे गर्न उसले मानी कि मानिन?— एलिएजरलाई यहोवाले नै त्यहाँ पठाउनुभएको हो भनेर रिबेकाले बुझेकी थिई। त्यसैले बुबाआमा अनि दाइले ‘तिमी कनानमा गएर इसहाकसँग बिहे गर्छ्यौ त’ भनेर सोध्दा रिबेकाले ‘हुन्छ, म जान्छु’ भनी। रिबेका तुरुन्तै कनान जान्छे। कनान पुगेपछि उसले इसहाकलाई भेट्छे। त्यसपछि तिनीहरूको बिहे हुन्छ।
यहोवालाई जे मनपर्छ, रिबेकाले त्यही गरी। त्यसैले यहोवाले पनि उसलाई आशिष्‌ दिनुभयो। धेरै वर्षपछि रिबेकाकै परिवारबाट येशूको जन्म भयो। यहोवालाई मनपर्ने काम गऱ्यौ भने उहाँले तिमीलाई पनि आशिष्‌ दिनुहुनेछ।
बाइबल खोलेर पढ
उत्पत्ति १२:४, ५; २४:१-५८, ६७
रिबेका को थिई?
इसहाकले कनानको केटीसित बिहे गरेको अब्राहामलाई मन पर्दैनथ्यो, किन?
एलिएजरले इसहाकको लागि दुलही छान्नुअघि के गऱ्यो? उसले के भनेर प्रार्थना गऱ्यो?
रिबेकाले जस्तै तिमीले पनि के गर्नुपर्छ?